Maitiro ekuwana ese screenshots paMac yedu kubva kune Yekutsvaga | Ndinobva mac
Maitiro ekuwana ese screenshots paMac yedu kubva kune Tsvaga
Ignacio Sala | | Mac Os X, Tutorials
Kana isu tichiwanzozvipira kunyora uye isu tichida kutora screenshots, zvinokwanisika kuti kana isu tisingawanzo kungwarira, Mac yedu inozopedzisira iine nhamba hombe yekutorwa kunogoverwa neMac yedu.Semutemo wakazara, kunze kwekunge isu chinja, ese ma screenshots atinotora anongo chengetedzwa pakombuta yekomputa yedu.
Gare gare isu tinogona kuzvichengetera kana kuzvibvisa kana zvisiri kuzodiwa mune ramangwana. Asi kana iwe ukaachengeta kuti ugone kuashandisazve, zvinogona kunge zvakaoma kuti uzviwane kana tisina kumbozvipa mazita. Neraki kuburikidza neMutsvaga Tinogona kutsvaga ese screenshots akachengetwa pakombuta yedu.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti kune nzira dzakasiyana dzekuwana ese screenshots, zvisinei nekuti takavapa mazita kana kwete, muchinyorwa chino ini ndinongotarisa pakuratidza iyo nzira yekugona kuita tsvagiridzo nenzira yakapusa: kuburikidza neKutsvaga.
Kutanga iwe unofanirwa kuvhura iyo Tsvaga uye enda kubhokisi rekutsvaga. Isu tinogona zvakare kuenda takananga kudesktop uye tinya iyo Command + F kiyi musanganiswa.
Tevere tinosarudza Mac, kuitira kuti iite tsvagiridzo mukati meMac uye gare gare mubhokisi rekutsvaga tinonyora "kMDItemIsScreenCapture: 1" isina makotesheni kuitira kuti iyo Tsvaga itiratidze yega skrini dzakachengetwa paMac yedu.
Zita rinochengetwa zvinotorwa muchiSpanish ndi «Screenshot». Uyu murairo hautsvage nezita refaira, asi nenzira inoshandiswa kugadzira.
Kana isu tichida kudzima zvese kana chikamu cheescreenshots iyo iyo Finder inotiratidza mushure mekuita kutsvaga, isu tinongofanirwa kuvasarudza uye nekuvatumira kune iro rinodzokorodza bin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuwana ese screenshots paMac yedu kubva kune Tsvaga
CryptoPrice, chishandiso chitsva cheavo vane cryptocurrencies
Kubva 1 kusvika kumazuva matatu. Nguva dzekutumira dzeAirPod dzinodonha zvakare